Myanmar Information: ရွှေမုဋ္ဌောမဟာစေတီတော်ကြီး၏ သမိုင်းအကျဉ်းချုပ် (ပုသိမ်)
ရွှေမုဋ္ဌောမဟာစေတီတော်ကြီး၏ သမိုင်းအကျဉ်းချုပ် (ပုသိမ်)
ရွှေမုဋ္ဌော မဟာစေတီတော်မြတ်ကြီးသည် ဘုရားရှင်ကိုယ်တော် မြတ်ကြီး၏ သရှီရမွေတော် ဓာတ်တော်များနှင့် အထူးထူး အပြားပြား များမြောင်လှသော အဖိုးတန် ရတနာတို့ဖြင့် ဌာပနာ၍ လွန်ခဲ့သော အနှစ် ၂၀၀၀ - ကျော်က စတင်တည်ထား ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
ကောဇာသက္ကရာဇ် ၂၈၉- ခုနှစ် တွင် သီရိဓမ္မာသောကမင်းကြီးက ရွှေအာဏာအမည်တော်ဖြင့် စတင်တည်ထား ကိုးကွယ်တော်မူခဲ့သည်။
အထက်မြန်မာပြည်ပုဂံမြို့ (ပေါက္ကံရာမပြည့်ရှင်) အလောင်းစည်သူ မင်းသည် ဖြိုကြွင်းသက္ကရာဇ် (၄၅၇) ခုနှစ်၌ ထူပါရုံ ဟူသော ဘွဲ့တော် ချီစေလျက်၊ တိုးမြှင့်တည်ထား ကိုးကွယ်တော်မူပြန်သည်။
ကောဇာသက္ကရာဇ် ၆၀၀-ပြည့်နှစ်၌၊ ပုသိမ်-၃၂ မြို့ကို အစိုးရသော သမုဒ္ဒဃောသ နှင့် ဥမ္မာဒန္တီတို့က ရွှေမုဋ္ဌော ဟူသော အမည်တော်ဖြင့် တည်ထား ကိုးကွယ်ထားခဲ့ရာ ယနေ့ထိ ထိုအမည်တော်ဖြင့် ထင်ရှားလျက် ရှိပါသည်။
ဤနောက်တွင် စစ်ကိုင်းဘုရင်မည်သော ဘကြီးတော်ဘုရားသည် လည်းကောင်း မင်းတုန်းမင်း၏ နောင်တော် ပုဂံမင်းသည်လည်းကောင်း ပဉ္စမသင်္ဂါယနာတင် မင်းတုန်းမင်းတရား သည်လည်းကောင်း၊ ထီးတော်လှူခြင်း၊ ရွှေလုံး တော်ပြည့် ကပ်လှူခြင်းနှင့်၊ အခြားပူဇော်သက္ကာ ပြုခြင်းတည်းဟူသော ကောင်းမှုတော်တို့ကို အဆက်ဆက် ပြုတော် မူခဲ့ကြသည့်အပြင် ပုသိမ်မြို့ကို ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်ကြကုန်သော မြို့ဝင်မင်း တို့သည်လည်းကောင်း စေတီတော် ကြီးအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ကိုးကွယ်ခဲ့ကြလေသည်။
ဒုတိယ အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ အရေးတော်ပုံခေတ် ဖြစ်သော ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၂၅- ခုနှစ်အတွင်း ဗြိတိသျှတို့ ဤပုသိမ်မြို့ကို သိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်သည့် နောက်ပိုင်း၌ ဗြိတိသျှအစိုးရ ခန့်စစ်ကဲတော် မင်း တို့သည်လည်းကောင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြို့မိမြို့ဖတို့ သည်လည်း ကောင်း အမျိုးမျိုးသော ပူဇော်သက္ကာ အမှုတို့ဖြင့် အဆက်ဆက် ထိန်း သိမ်း စောင့်ရှောက် ကိုးကွယ်ခဲ့ကြရာ၊ ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၂၅၆ ခုနှစ် တွင်ယနေ့ တည်ရှိတော်မူသည့် အတိုင်းဖြစ်သောမြေမှ ခရားသီး အဆုံးအထိ ၇၇-တောင်၊ ထီးအရပ် ၂၅-တောင်၊ နှစ်ရပ်ပေါင်းသံတောင် ၁၀၂-တောင်၊ လုံးပတ်တော် ၂၀၇-တောင်နှင့် ဖိနပ်တော် ၂၇၂-တောင် အသီးသီးရှိကုန်သော ဥာဏ်တော် လုံးဝန်းပမာဏတော်ကို ဆောင်စေလျက်၊ စိန်ဖူးတော် ရွှေထီးတော် ငွေထီးတော် အပြင်၊ ရတနာ အပေါင်းတို့ဖြင့်စီခြယ် အပ်သော ရွှေသားငှက်မြတ်နားတော် တို့ဖြင့် ခမ်းနား ထယ်ဝါ ကြည်ညိုဖွယ်ရာ တိုးမြှင့်တည်ထား ခဲ့နိုင်ကြလေသည်။
ထီးတော်ကို အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတပ်ဆင်မှုကြောင့် ယခုအခါ စေတီတော်မြတ်၏ ဥာဏ်တော်မှာ (၄၆.၆) မီတာ (၁၅၂ ပေခန့်) ရှိလာ သော်လည်း မြန်မာ့စေတီတော်မြတ်များ၏ ပုံသဏ္ဍာန်မှာ ရှင်သမုဒ္ဒ ဃောသ ခေတ်မှစ၍ အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ထီးတော်၏ အပေါ်ဆုံးအဆင့်ကို ရွှေအလေးချိန် (၆.၃) ကီလိုဂရမ် (၃ပိဿာ ၉၃ ကျပ်သားခန့်) ဖြင့်လည်းကောင်း အလယ်ဆင့်ကို ငွေစင်ဖြင့်လည်း ကောင်း အောက်ဆင့်ကို ရွှေပါးလွှာဖြင့် လည်းကောင်း အုပ်ထားပြီး စိန် (၈၂၉) လုံး၊ ပတ္တမြား (၈၄၃) လုံး နှင့် အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာ (၁၅၈၈) လုံးတို့ဖြင့် တန်ဆာဆင်ထားပါသည်။
Posted by Myanmar Information at 1:34 PM
မြန်မာလူမျိုး၊ မြန်မာနိုင်ငံ အကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြောင်းအရာများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးများကို ရှာဖွေစုစည်း တင်ပြပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
uk vpn Diseño Web en Sevilla
ရွှေဘိုမြို့၏ ထင်ရှားသော စေတီပုထိုးများ
ဆုတောင်းပြည့် အောင်စကြာ နှီးဘုရား ဗုဒ္ဓရုပ်ရှင်တော်...
လေးကျွန်းရန်အောင် ဖောင်တော်ဦးစေတီတော် (ပုသိမ်)
ရွှေမုဋ္ဌောမဟာစေတီတော်ကြီး၏ သမိုင်းအကျဉ်းချုပ် (ပုသိမ...
စေတီတော် တည်ထားပုံ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်ရှိ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်သည် အရှေ့ရိုးမတောင်တန်း အပါအဝင်ဖြစ်သော ပေါင်းလောင်းတောင်ပေါ်တွင် တည်ရှိ...
ကျန်းမာစစ်ဆေး သက်ရှည်ရေး ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ခြင်းနှင့်ကင်ဆာရောဂါ
Health Update Journal မှ ကူးယူဖော်ပြပေးသည်။ နာတာရှည် ကူးစက်ရောဂါမဟုတ်တဲ့ ဆီးချို၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါတွေက၊ ကျန်းမာရေးဆေးစစ် ... ...
မြတ်ဗုဒ္ဓဖြေကြားသော ကောသလအိပ်မက် ၁၆-ချက် ရှစ်လုံးဖွဲ့ မြန်မာကဗျာများ (၁) အမေး။ ။ နွားနက်လေးခု ဝှေ့မှုဟန်ပြင်၊ မဝှေ့ကြဘဲ ရှောင်လွှဲသည်မြင်။ ...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ၁၃၅
၁- ကချင် ၂- ကယား(ကရင်နီ) ၃- ကယမ်း(ပဒေါင်) ၄- ကရင်ဖြူ ၅- ကလင်တော(လူရှေ) ၆- ကော် ၇- ကိုးကန့် ၈- ကွီ ၉- ခမီ ၁၀- ခေါနိုး ၁၁- ခေါင်းအိ...
ရွှေစည်းခုံစေတီတော် တည်နေရာ ညောင်ဦးမြို့၊ ဧရာဝတီမြစ် ကမ်းနဖူး ဉာဏ်တော် ပေ (၁၆၀) ကျော်ကြားမှု ပုဂံမင်းနှစ်ပါး တည်ခဲ့ပြီး၊ သိမှတ်ဖွယ...
အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဘုရားသည် အင်းလေးကန် ရှိ နန်ဟူးရွာ၌ တည်ရှိသော ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကိုးကွယ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် သာမက၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ခရီးသွားဧည့...
အတွင်း (၃၇)မင်း၊ အပြင် (၃၇)မင်းနတ်များ
အတွင်းမင်းနတ်များမှာ ပါထေယျဝဂ် အာဋာနာဋိယသုတ်ပါဠိတော်၌ ပါရှိသော ၃၇-မင်းနတ်များ ဖြစ်သည်။ 1. ဣန္ဒနတ် 2. သောမနတ် 3. ဝရုဏနတ် 4. ဘ...
ဇနကဇာတ်တော်ဟု အတိုချုံး၍ ခေါ်ဝေါ်ကြသော မဟာဇနကဇာတ်တော်သည် "ဇာတ်ကြီး ဆယ်ဘွဲ့">ဇာတ်ကြီး ဆယ်ဘွဲ့တွင် ဒုတိယမြောက် ဇာတ်တော်ဖြစ်၍ မ...
ဂေါတမဗုဒ္ဓ သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ် စစ်မှန်သော ဗုဒ္ဓ၏ကိုယ်ပွားသာလျှင် ဖြစ်တန်ရာ၏ဟု ရခိုင်လူမျိုးများ အယုံအကြည်ရှိသော မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ြ...
ရွှေတိဂုံ စေတီတော် သမိုင်း
ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီး၏ဉာဏ်တော်မှာ ဖိနပ်တော်မှ စိန်ဖူးတော်ထိ (၃၂၆) ပေဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ရှိ သိင်္ဂုတ္တရ ကုန်းတော်ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ...
သုမေဓာရှင်ရသေ့သည် နောင်လေးသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းကြာသောအခါ တရားအလုံးစုံကို ကိုယ်တော်တိုင်သိတော်မူသော သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင် ဂေါတမမြတ်ဗုဒ္ဓဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ဒီပင်္ကရာဘုရား ဗျာဒိတ်စကား ပေးတော်မူပုံ